यौ,न स म्प र्कबाट श्रीमती स’न्तुष्ट भए नभएको कसरी थाहा पाउने ? : डाक्टर यस्तो भन्छन – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/यौ,न स म्प र्कबाट श्रीमती स’न्तुष्ट भए नभएको कसरी थाहा पाउने ? : डाक्टर यस्तो भन्छन
तपाईंकी श्रीमती सन्तुष्ट नभएकै हो वा तपाईंलाई त्यस्तो लागेको मात्र हो भन्ने कुराअनुसार फरक–फरक समाधान हुन सक्छ । तपाईंकी श्रीमतीमा यौ, नेच्छा बढी भएको पनि हुन सक्छ । यो कुरा तपाईंहरूबीचको सम्बन्धको सुमधुरता मात्र होइन, शा’रि’रीक तथा मा’नसिक स्थितिमा पनि भर पर्छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यौ,नस,म्पर्कवाट मात्र महिलाले यौ, न स, न्तुष्टि प्राप्त गर्ने होइन । महिलाले कसरी यौ, न सुख प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिने मात्र होइन, त्यसमा संलग्न पनि हुनुपर्छ ।